युएईमा लाग्यो ५% भ्याट: लाखौ नेपाली प्रभावित, के-केमा लाग्छ भ्याट ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more युएईमा लाग्यो ५% भ्याट: लाखौ नेपाली प्रभावित, के-केमा लाग्छ भ्याट ?
युएईमा लाग्यो ५% भ्याट: लाखौ नेपाली प्रभावित, के-केमा लाग्छ भ्याट ?
पुस १९ गते, २०७४ - ०७:५८
तर पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन मर्मत र टोल गेट ट्याक्समा भने भ्याट लाग्नेछ । कामदारहरुलाई दिईएको मेडिकल इन्स्युरेन्स सुबिधाको प्रिमियममा भने भ्याट लाग्नेछ । कामदार मृत्यु हुँदा पाउने ईन्सुरेन्समा (जीवन बिमा) भने भ्याट लाग्नेछैन । मेडिकल इन्स्युरेन्सको प्रिमियममा लाग्ने भ्याट कम्पनीले तिर्नु पर्नेछ । सरकारले मुल्य अभिबृद्दी कर लागु गरे सङ्गै मासिक तलबमा वृद्धि नगरे पछी थोरै तलबमा काम गर्दै आयका नेपाली लगायत अन्य रास्ट्रका नागरिकलाइ अब युएईमा रहन धौधौ हुने भएको छ । सन्चार माध्यमका अनुसार युएई र साउदी अरब सङ्गै खाडिका अन्य मुलुकमा समेत केहि समय भित्रनै मूल्य अभिबृद्दी कर लागू हुने बताइएको छ ।
पुस १९ गते, २०७४ - ०७:५८ मा प्रकाशित